Ke unokurekhoda isikrini sakho sekhompyuter ngaphandle kokufaka nantoni na | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Rekhoda isikrini.io yinkqubo yewebhu esivumela ukuba sibhale isikrini kwikhompyuter yethu ngaphandle kokufaka nantoni na, kuba yonke into yenziwe kwiwebhusayithi yabo. Ewe kunjalo, bahlala besebenzisa isikhangeli ngaphandle kokudlulisa nantoni na kwiiseva zabo.
Inqaku elo libaluleke ngaphezu kokuqinisekisa ukuba oko sikurekhodayo akuyi kudlula kubantu besithathuEndaweni yoko, izibonelelo zasekhaya zewebhusayithi esivula kuyo ukuba zisetyenziselwa ukurekhoda ziya kusetyenziswa ngaphandle kweendleko.
Ngamanye amagama, liphethe ukurekhoda isikrini sekhompyuter yethu ngaphandle kokufaka naluphi na ulwandiso lweChannel okanye ukhuphele i .exe. Sivula iScreenscreen.io ukusinika iindlela ezimbini. Enye iya kuba kukurekhoda kuphela isikrini, ngelixa elinye linokuba siscreen kunye nekhamera yewebhu.
Inika amanyathelo amabini anomdla wokuya kuthotho lolungiselelo apho ucela ukuba arekhode yonke ikhusi, iwindow yenkqubo ethile okanye isithuba nje somkhangeli wewebhu.
Ngokwenyani sijamelene nesixhobo esikwi-intanethi esinokusikhupha ezinkathazweni kunenye xa sifuna ukurekhoda iseshoni ukuze sikhuphele iziphumo zefayile yevidiyo. Konke ngaphandle komzamo omkhulu kunye nokulula ukuba yonke into yenziwe kwisikhangeli esivule ngayo le app yewebhu.
Ngelixa izolo besithetha nge-app yewebhu esivumelayo phucula izikrini esikwenzayo ngekhompyuter yethu, Rekhoda isikrini.io inika amaphiko ukurekhoda iiseshoni ezipheleleyo Ngaphandle kokusebenzisa inkqubo esiyikhuphelileyo okanye ungene nge-Google okanye i-Facebook.
Enye ngaphezulu umdla app ye-intanethi onokufikelela kuyo kweli qhagamshelo kwaye uya kuhlala ufumaneka ukurekhoda iwindow okanye isikrini sonke sePC yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Rekhoda isikrini sakho sekhompyuter ngeRekhodi ebonakalayo.io kwiwebhusayithi yabo
Xa ilogo yeOlimpiki yaseTokyo engafanelekanga ibhetele kunaye ewe osemthethweni